एक एयरटागले नक्कल डकैतीमा साइकल पत्ता लगाउँदछ म म्याकबाट हुँ
एक एयरट्यागले साइकललाई नक्कल डकैतीमा राख्छ
टोनी कोर्टेस | 15/05/2021 14:00 | धेरै
कुनै श doubt्का छैन एयरट्याग यो फैशनेबल भएको छ। एउटा सानो एप्पल उपकरण जुन हटकेकहरू जस्तो बेच्ने छ। म पक्का छु। एक ट्र्याकर एप्पलको "खोज" इकोसिस्टममा एकीकृत, ब्याट्रीको साथ जुन एक बर्षसम्म चलेको छ, र Eur 35 यूरो खर्च गर्दछ। सफलताको आश्वासन
सबै "बुल्शिट" मध्येच ती गरिब एयरट्यागमा गरिरहेका छन् YouTube, हामीले एउटा धेरै रोचक भिडियो भेट्टायौं। तिनीहरूले साइकलको चोरी नक्कल गरेका छन्, जसमा लुकेको एयरट्याग थियो। के उनीहरूले यो भेट्टाए?
साइकलको पसलले यो जाँच गर्न चाहेको छ कि यो साइकलमा एयरट्याग लुकाउन लायकको छ कि छैन, र यसरी चोरी भएमा यसलाई पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ। Eur 35 यूरो को लागी तपाईले प्रमाणित गर्नु पर्‍यो कि यो चोरीको मामिलामा प्रभावकारी छ कि छैन, र यसलाई सँधै बाइकमा लुकाएर राख्नु पर्दछ। र सत्य यो हो तिनीहरूले उनलाई भेटे.
स्टोर एक को रूपमा एक एयरट्याग कन्फिगर गरेर शुरू भयो साइकल, र त्यसपछि यो पसलको बाहिर पार्क गरिएको साइकलमा काठीमुनि ट्याप गरियो। एक "संदिग्ध" चोरले उसको बाइकलाई अज्ञात स्थानमा लग्यो। "१० चोर" स्टोरबाट टाढा हुनको लागि उनीहरूले १० मिनेट पर्खाए, र खोज सुरू गरे।
तिनीहरूले पहिलो स्थान कथित डकैती पछि minutes मिनेटमा पाए, र दोस्रो २० मिनेट पछि। तुलनात्मक रूपमा लामो अन्तरालहरूले सायद यो कम जनसंख्या भएको तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, त्यसैले त्यतिखेर थोरै मानिसहरू सडकमा थिए। यसबाहेक, 'चोर' चल्दै गयो, त्यसैले स्थान अपडेटको लागि एक मात्र मौका क्षणिक क्षणहरूमा थियो जब बाइक एक नजिकको नजिक पुग्यो। आईफोन मानौं उनीहरूको उपस्थिति व्यक्त गर्न।
नेलहरू अन केहि स्थानहरू तिनीहरू साइकल चोर कहाँ गए भनेर बताउन सक्षम भए, र अनुमान गरे कि उनले कुन बाटोहरू छनौट गरे जुन उनीहरू गए। अधिक जनसंख्या भएको शहरमा उनीहरूसँग चोर कतातिर गएको हो भनेर भविष्यवाणी गर्ने कम क्षमता हुने थियो, तर त्यस स्थानमा धेरै आईफोनहरू भेट्टाए पछि बढी सटीक हुने थियो।
चोरिएको बाइक पत्ता लगाउन आधा घण्टा लाग्यो
तेस्रो स्थान "डकैती" पछि २ minutes मिनेट पछि भयो, र चौथोमा 33 मिनेट। साइकल एक आवासीय क्षेत्रमा अवस्थित थियो, र यो थियो स्थित छ शारीरिक रूपमा लुटेको एक आधा घण्टा पछि।
एप्पल विज्ञापन गर्दैन एयरट्याग एक चोरी चोरी उपकरण को रूप मा, तर यो पनी कुनै समस्या बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले एक भन्दा बढि यो लुक्दै गइरहेको छ उसको साइकल, स्कूटर वा कार, कुनै श .्का बिना।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » एक एयरट्यागले साइकललाई नक्कल डकैतीमा राख्छ
आईएमएसी प्रो स्पेस ग्रे एसेसरीज बिक्रीमा जबकि आपूर्ति अन्तिम छ